Stoke Voltaire သည် Lightspeed ဦး ဆောင်သော Pre-A ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၇. ၈ သန်း ရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
Stoke Voltaire သည် Lightspeed ဦး ဆောင်သော Pre-A ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၇. ၈ သန်း ရရှိ ခဲ့သည်
Jan 10, 2022, 19:42ညနေ 2022/01/10 23:20:53 Pandaily
China Outdoor 3C (ကွန်ပျူ တာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူ) အီလက်ထရောနစ် ဟာ့ဒ်ဝဲ တီထွင် သူ Stoke Voltaire,Pre-A Round Financing တွင် ယွမ်သန်း ၅၀ (ဒေါ်လာ ၇. ၈ သန်း) ရရှိ ခဲ့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကို Light Speed China Partners က ဦး ဆောင်သည်။
ရရှိသော ငွေများကို ဆန်းသစ် သော ပြင်ပ 3C ထုတ်ကုန်များ ကိုတီထွင် ရန်အသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ရှိ ကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ် ကိုတည်ဆောက် ရန်လည်း ကူညီ လိမ့်မည်။ ထို ငွေ သည် ဖြန့်ဝေထားသော စွမ်းအင် ပစ္စည်းကိရိယာ များနှင့်အခြား ထုတ်ကုန် အမှတ်တံဆိပ် များကို ပေါက်ဖွား ရန်လည်း အသုံးပြုသည်။
Stoke Voltaire ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Marshall Yuan က ကုမ္ပဏီ ၏စီးပွားရေး တွန်းအားပေး မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ “လူသား များသည် မသိသော နယ်နိမိတ် များကို အဆက်မပြတ် ရှာဖွေ ရန်လိုအပ် သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ထင် ပါသည်။ ယနေ့ အချိန်တွင် ဇယားကွက် သည် 1% ထက်မပို သော covered ရိယာ ကို လွှမ်းခြုံ နိုင်ပြီး ဖြန့်ဝေထားသော စွမ်းအင် ပစ္စည်းကိရိယာ များ၏ လူကြိုက်များ မှုနှင့်အတူ ပြင်ပ တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက် ပိုမိုများပြား လာသည်။”
Stoke Voltaire ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ကမ္ဘာ့စျေးကွက် အတွက် ပြင်ပ 3C hardware ထုတ်ကုန်များ ကိုဒီဇိုင်းဆွဲ ရန်၊ ထုတ်လုပ် ရန်နှင့် ရောင်းချ ရန် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း ၏စွမ်းအင် အမှတ်တံဆိပ် သည် ကိုယ်ပိုင် ဖြန့်ဝေထားသော စွမ်းအင် ဖြေရှင်း ချက်များ ကိုပေးသည်။
ကုမ္ပဏီ ကိုတည်ထောင် သူများသည် စ တန်း ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၊ မက် ဆာ ချူး ဆက် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ Imperial ကောလိပ် ၊ နန် ဂျင်း တက္ကသိုလ် နှင့် Harbin နည်းပညာ တက္ကသိုလ် စသည့် ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် များမှ ဘွဲ့ရ များဖြစ်သည်။ သူတို့က ပြင်ပ နည်းပညာ အမှတ်တံဆိပ် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စီးပွားဖြစ် အတွက် အတွေ့အကြုံ ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Bluepha သည် Round B ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၁. ၅ ဘီလီယံ ရရှိ ခဲ့သည်
“စွမ်းအင် သို လှ ော င်ရန် စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် များနှင့် ဖြုတ် တပ် နိုင်သော ဆိုလာ ပြား များကဲ့သို့ ဖြန့်ဝေထားသော စွမ်းအင် ကိရိယာ များ လူကြိုက်များ လာသည်နှင့်အမျှ လူတို့သည် အိမ်တွင်း ကဲ့သို့ တူညီသော သို့မဟုတ် ပို၍ အဆင်ပြေသော ပြင်ပ လူနေမှု ပုံစံကို တဖြည်းဖြည်း စတင် ရရှိ လာကြ လိမ့်မည်” ဟု ယွမ် က ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေး လှုပ်ရှားမှု အပြီးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
DataStory $25 သန်း C2 Round ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
ကြီးမားသော ဒေတာ နှင့် အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ DataStory သည် ယွမ်သန်း ၁၆၀ (ဒေါ်လာ ၂၅. ၃ သန်း) တန်ဖိုးရှိ C2 ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
Startups Feb 17 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2022
Shunwei Capital Investment အချိုပွဲ မုန့် ဖုတ် ကွင်းဆက် အမှတ်တံဆိပ် Happycow Handmade
အချိုပွဲ မုန့် ဖုတ် ကွင်းဆက် အမှတ်တံဆိပ် Happycow Handmade သည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း နီးပါး တန်ဖိုးရှိ ရန်ပုံငွေ A ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။